Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKWIKWỌ ASIAN Ndị na-egwu bọọlụ Oceania Ụmụaka Aaron Mooy Akụkọ Nke Na-emeghe Ihe Ndị Na-emeghị Eme
LB na-egosi Full Story of a Midfield Genius onye kacha mara aha na aha njirimara; “Isi Nke Na-adịghị Mma”. Aaronmụaka Aaron Mooy Akụkọ ya na akụkọ na-enweghị isi akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nchoputa nke Aaron Mooy Biography bu ihe omuma banyere akwukwo nwata ya, Nko mbido ya, ndi nne na nna, ezinulo ya, nwunye (Nicola Mooy), ibi ndu, uru di na ndu nke onwe.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ọchịchị ya mana mana ole na ole na-ele Aaron Aaron Mooy's Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ anya. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Aaron Mooy nke Childhoodmụaka - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Aaron Frank Mooy na 15th ụbọchị Septemba na Sydney, Australia. Mgbe a mụsịrị ya, a kpọrọ ya Aaron Kuhlman ọ bụghị Aaron Mooy. Nne Dutch ya gbanwere aha nna ya mgbe o kewapụrụ site na nna ya mgbe obere Mooy bụ nwata. N'ezie, Mooy hụrụ nna ya naanị otu ugboro - mgbe ahụ ọ bụ nanị obere oge mgbe ọ bụ nwata.
Nwa na-eme ihere, nwa ntutu na-acha ntutu isi hụrụ football n'anya na ndị mụrụ ya zụlitere ya. N'oge ahụ, ọ na-ara ahụ ikiri egwuregwu abalị nke Australian (Premier League) na TV ma na-ewe iwe banyere ya.
Mooy ga-aga ahịa ma nweta uwe egwuregwu Manchester United. David Beckham bụ ọkacha mmasị ya, mgbe ọ bụla ọ nọ na TV Erọn ga-ekiri. Mgbe ọ na-ele Beckham, ọ ga-eme ihe omume ya ma mee ka ọ bụ ya.
Dị ka Football ghọrọ akụkụ buru ibu nke ndụ nwata, Aaron enweghị ike ịkwụsị iche echiche ịghọ ndị ịgba egwu bọọlụ. Ọ sonyeere The New South Wales Institute of Sport (NSWIS), nke dị na Sydney Olympic Park iji bido ọrụ ntorobịa ya.
Mooy gbasoro ụzọ dị mma maka ọtụtụ ndị na-agba ọsọ ụkwụ ma jupụta ndụ ya mgbe ọ dị obere ịchụso nrọ ya. Ọ hapụrụ Australia mgbe ọ dị afọ 15 na-ekpuchi ọkụ na-acha ọkụ na agụụ na-agụ ọkụ dị ka e sere n'okpuru.
Ọ malitere ọrụ ya na Europe dị ka onye ntorobịa na-eto eto na Bolton Wanderers mgbe Chris Sulley hụrụ ya. Aaron Mooy jụrụ nkwekọrịta nkwekọrịta site na Bolton na July 2010 iji chọọ egwuregwu bọọlụ nke mbụ.
O mechara sonye Scottish Premier League club St Mirren na 23 October 2010. Na-awụ akpata oyi n'ahụ, Mooy mechara gbanye England maka Scotland tupu ya alaghachi na 2012 iji sonyere Western Sydney Wanderers na A-League.
Na 2016, a kpụgara ya England ka ọ kpọọ Manchester City. N'ebe ahụ, ọ si na mbinye ego gaa na-aga n'ihu na Huddersfield Town. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ọnye na-bụ Nicola Mooy? Nwunye Aaron Mooy:
Aaron Mooy hụrụ ịhụnanya maka ndụ ya, na 2011 n'oge ya na ndị otu egwuregwu Scottish St Mirren FC Aaron na Nicola toro ọnụ na n'anya na nkwekọrịta. Ha na-ele mmekọrịta ha anya dị ka njem na-adịru mgbe ebighị ebi.
Dị ka nne ma ọ bụ nna ọ bụla, ndụ Aaron Mooy gbanwere mgbe a mụrụ nwa mbụ ya. Igwe Australian nwere ọtụtụ ihe kpatara ọtụtụ oge maka ntụgharị uche miri emi. Anyị na-agwa gị ihe kpatara ya…
N'okwu ya… “Ugbu a m nwere nwa ewu (Skylar) Aghọtara m otú m si hụ nwa ọhụrụ m n'anya. Ọ bụ ihe nzuzu ugbua. Maka ya ka ọ ghara chọrọ ịhụ m, dị ka papa m.
N'ezie, aghọtaghị m. Obi dị m ụtọ ugbu a. Ọ bụ n'oge gara aga, achọghị m iche maka ya ọzọ. M na-eche echiche mgbe niile banyere football na ọ bụrụ na m nwere egwuregwu ọjọọ m ga-eche banyere ya ruo ọtụtụ ụbọchị. Ugbu a, enwere m nwa m, ọ na-ewepụkwa uche m, '' Aaron Mooy kwuru.
Ndị mbụ West Sydney Wanderers na Melbourne City kpakpando zutere Nicola na 2011 ma nwee obi uto ka ha kee eriri ahụ. O mechara bụrụ nwunye m! Lee ụbọchị dị ịtụnanya, ” o dere na Instagram.
Ndụ Aaron Mooy:
N'agbanyeghị nsogbu ezinụlọ ya, Mooy tolitere n'ezinụlọ na-ahụ n'anya, mama ya nwere obi ike na-enye ọkpụkpụ azụ yana onye na-ahụ n'anya, Alan Todd onye Erọn hụrụ n'anya nke ukwuu. A mụrụ nna nna Aaron na Germany.
N'otu oge, Erọn kpebiri izute ezigbo nna ya mgbe ọ chọrọ ka ọ bịanye aka na kọlụm nke akwụkwọ ikike Dutch ahụ agaghị enweta.
Dị ka Erọn si kwuo ya; "M zutere ya otu ugboro iji mee ka ọ banye akwụkwọ maka akwụkwọ ikike Dutch m, nke ahụ bụ nanị oge," Mooy kwuru…."Ọ bụ tupu mụ aga England, n'ihi ya, m bụ ma eleghị anya 14. Ọ dị mkpirikpi. "
Mgbe ọ zutere nwanne ya: N'otu oge, ọ nọ n'otu ụlọ ahịa na ụfọdụ ụmụ nwanyị na-asụ Wanderers nke dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Sydney na nwata a bịakwutere ya ma sị, 'Hi m bụ Kuhlman, otu nna anyị na mama m nwetara foto gị dịka nwatakịrị'.
Aaron Mooy kwuru…"Idem ama akpa mi, ke nditịn̄ ikọ, mînyeneke nditịm. Amaara m na ọ ga-enwe ụmụ ma enweghi m mmata ma ole ma ọ bụ afọ. Echeghị m na m ga-agwa ya okwu. Ọbụna dịka nwatakịrị m achọghị ịmara ya, enwere m oge mkparị, ọ dị ogologo oge na-enweghị ya ọ bụla. N'ezie, ihe mbụ m chetara na-egwu bọl maka Carlingford Redbacks na onye m na-eme ka ọ bụrụ onye nkụzi. ''
Ndụ Aaron Mooy nke Onwe:
Aaron Mooy nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike Aaron Mooy: Ọ na-eguzosi ike n'ihe (mmekọrịta na onye maara ihe), nyocha, obiọma, na-arụsi ọrụ ike.
Adịghị ike Aaron Mooy: Ọ na-echegbu onwe ya nke ukwuu, ọ pụkwara ịrụ ọrụ ụbọchị niile n'enweghị egwuregwu.
Ihe Aaron Mooy nwere mmasị: Ịcha ntutu isi, anụmanụ, nri siri ike, akwụkwọ, ọdịdị na ịdị ọcha
Ihe Aaron Mooy achọghị: Mgbaghara, na-arịọ maka enyemaka, na-ewere ọnọdụ dị n'etiti.
Na nchịkọta, Aaron bụ onye ga-a paya ntị na nkọwa kacha nta na nghọta miri emi nke mmadụ na-eme ka ọ kpachara anya na mmekọrịta ndụ.
Eziokwu nke Aaron Mooy Tattoo:
Mooy bụ onye nketa Dutch, na n'ubu aka ekpe ya, o nwere okwu ndị a "Leven, Lachen, Liefde" egbu egbu, nke na-asụgharị na "Ndụ, Ịhụnanya, Ọchị". Nne ya, Sam, nwere otu okwu ahụ n'aka nkwekọrịta ya.
Aaron Mooy Untold Biography Eziokwu - Ọ gara otu ụlọ akwụkwọ sekọndrị dịka Harry Kewell:
Westfield Sports High, nke a makwaara dị ka Fairfield Football Factory, nwere aha ọma maka ịmepụta ntụrụndụ egwuregwu kacha mma na Australia. Kewell bụ onye gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị na otú ahụ bụ Mooy.
Aaron Mooy Untold Biography Eziokwu - Abụ nke Sọpụrụ Ya:
Mooy's ezigbo isi bụ isiokwu nke abụ Huddersfield Town. Sung to tune nke Boney M si 1978 kụrụ Ọ na-aga dị ka nke a ...
“Kpọọ! Kpọọ! Ọ bụ kacha nai-Ezumike! ”, abụ na-aga, "Aaron Mooy, Aaron Mooy. Aaron, Aaron Mooy. O nweghị ntutu isi, ma anyị anaghị elekọta. Erọn, Aaron Mooy. "
Aaron Mooy Bio - nyeere Huddersfield Town aka na EPL maka oge mbụ kemgbe 1972:
A naghị atụ anya na Huddersfield Town ga-enweta nkwalite na Premier League n'oge a, mana Mooy na-akpa anwansi ya na midfield, ụlọ ọrụ ahụ laghachiri n'ụgbọ elu mbụ maka oge mbụ n'ime afọ 45.
N’ụzọ ahụ, Mooy meriri ihe mgbaru ọsọ anọ, gụnyere oke ntaramahụhụ megide Reading na egwuregwu ikpeazụ nke oge 2016-17.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụAnyị Aaron Mooy Nwatakịrị Na-akọ akụkọ ọzọ akụkọ ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Akwụkwọ akụkọ Huddersfield Town